Ingulube - a, inyama okunamafutha namanzi, okuyinto awunankinga yokwenze ukudla ebusika. Kusukela ke ongayenza chops, goulash, Burgers kanye nezinye izitsha. Namuhla, othandwa kakhulu emazweni anjenge Germany, France, eScandinavia, China ne -mpumalanga Asia. Futhi uma ingulube kwakungafanele eshibhile futhi ezingabizi futhi ngenxa yalokho wayengabophekile kubhekwe kwabantu abadla imbuya ngothi. Esihle ingulube inyama sakuba ngombala. Inyama, kokuba umbala omhlophe, cishe kunganambitheki, okukhanyayo - flabby.
A isidlo ovamile kakhulu yilona ingulube e ukhilimu omuncu. Udinga ukuthatha is hhayi simisiwe ingulube, ukhilimu omuncu, u-anyanisi, emnyama. Indishi ibhalwe kanje: Sika inyama zibe yizicucu amancane ufafaza nabo ngosawoti kanye nezinongo. Khona-ke, ukusika bese Fry anyanisi ezimbili ophansi. Lapho Browns onion kahle, enezele futhi inyama.
Lapho inyama kuphekeke, kubalulekile ukwengeza amanzi kancane futhi sikadali imizuzu eyishumi ngaphansi lid. Khona-ke ukususa lid, engeza ukushisa kanye ibila kuze liquid ayahwamuka ngokuphelele. Ngemva kwalokho, uthele inyama omuncu, ukunciphisa ukushisa uhlanganise kahle. Manje udinga ukucisha umlilo. Ingulube e ukhilimu omuncu kumele asukume ngaphansi hood ngoba ncamashi umzuzu owodwa. Khona-ke ukususa lid ukukhonza. Ukuze Hlobisa ungakwazi ukupheka irayisi, i-pasta, amazambane ecubuziwe.
Ingulube e ukhilimu omuncu ebhodweni nge amazambane kanye amakhowe
Thatha inyama yengulube - 500 amagremu, amazambane ngaloyo eziyishumi, ama ezimbili, 150 amagremu of amakhowe omisiwe, amafutha yemifino, emhlabathini pepper. Ukulungisa sauce ukhilimu uthathe ingilazi futhi umhluzi ingilazi ezisele ngemuva amakhowe, ibhotela ufulawa (isipuni). Ingulube ngamanzi abandayo, uthathe yizicucu futhi ethosiwe kuze uhhafu. Isizini ngosawoti, ufafaze pepper kanye ukuxuba.
Geza amakhowe futhi cwilisa amahora amabili. Base ubilise, ukusika futhi ethosiwe emafutheni zemifino. Uhlanza bese uthathe cubes amazambane, bese wengeza ukuba amakhowe. Uma zonke izithako ethosiwe, badinga okwakumelwe zixutshwe bese efakwa izimbiza. Mushroom umhluzi ukhilimu omuncu sauce, futhi kubo ugcwalise amakhanzi, ke wagqoka imizuzu amahlanu kuhhavini.
Ingulube, wabhaka e cream sauce nge amakhowe
Ukudidiyela lesi sabelomali isidlo silula. Thatha inani elidingekayo imikhiqizo: yengulube, isikhunta (amakhowe), ukhilimu omuncu, amakhambi fresh. Lungisa isidlo bhaka beka yengulube kuwo. Beka phezulu amakhowe, onion, usawoti, futhi uthele wonke ukhilimu. Preheat kuhhavini owodwa namashumi ayisishiyagalombili degrees ubhake imizuzu amabili. Khona-ke ukwandisa izinga lokushisa amadigri ezingamakhulu amabili ubhake omunye imizuzu eyishumi. Ngaphambi abeke etafuleni, ukuhlobisa kancane, ufafaze amakhambi oqoshiwe.
Ingulube ithoswe yathamba e cream sauce nge imifino
Lokhu dish kungenziwa kuphekwe in a yokuwugazinga pan ezinkulu bese efakwa imbala, lapho singasetshenziswa ligcinwe izinsuku ezimbalwa ngaphandle kwezinkinga. Khonza sikadali yengulube kungenzeka nge ezahlukene side izitsha, hhayi ukhathazwa. Thatha inyama yengulube tenderloin 1 kilogram, izaqathe amabili, u-anyanisi ezimbili, 300 amagremu of amakhowe, amafutha yemifino, ukhilimu - 300 ufulawa igremu (wezipuni ezintathu), condiments kanye nezinongo. Kuyinto kusukela mikhiqizo elula esizolungisa yengulube e cream sauce nge imifino.
ingulube yami, uthathe tincetu noma cubes. Ukupheka imifino: ukusika emasongweni onion isigamu, izaqathe uthathe tincetu noma polukruzhkami, amakhowe crosswise zibe yizicucu ezine. Inyama ethosiwe - yebo, umlilo qina. Lokhu kwenziwa ukuze kwakhiwe uqweqwe - ngeke juice uphelelwa. Usawoti kanye pepper kwakudingeka ekupheleni ukupheka. Khona-ke udinga ukubeka inyama epanini yokuwugazinga ne juice kwakhiwa.
Manje gazinga uphendulela izaqathe, u-anyanisi, amakhowe - futhi on ukushisa high - futhi basakaza phezu inyama, engeza ingilazi yamanzi, amboze nge lid bese efakwa kuhhavini. Ngezinye lokushisa ezingamakhulu amabili isidlo kufanele izilungiselele imizuzu engamashumi amane. Khona-ke kudingeka uthole epanini yokuwugazinga, engeza seasonings nezinye izinongo futhi usawoti. Sigcwalise wonke ukhilimu omuncu, engeza ufulawa, isiyaluyalu futhi ubuselwe eziko. Ngemva kwemizuzu eyishumi, ingulube ulungile!
Isitshalo seqanda "Firebird": iresiphi
Indlela ukulungiselela rose kusuka inhlama: zokupheka
Ngazi kanjani wamanje akhawunti yenhlangano TIN: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo, izici kanye nezincomo